သင်၏ WordPress ဆိုဒ်အားမီးရောင်အချို့ပေးပါ Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 28, 2013 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သြဂုတ်လ 28, 2013 Douglas Karr
ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးများ၏သက်ရောက်မှုနှင့်တစ် ဦး ချင်းစီ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဖော်ပြမည့်ပလပ်ဂင်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်အချိန်အတော်အတန်ရှာဖွေခဲ့သည်။ နံပါတ်များသည်အရေးပါ၏…သူတို့ဟာယုံကြည်မှု၊ သင့်တွင်အစုရှယ်ယာအမြောက်အများရှိသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိပါကရှေးရှေးများသည်ထိုဆောင်းပါးကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ပြီး၎င်းကိုမျှဝေရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။
ဝင်ရောက် မီးရောင်လက်ခြင်း။ လူမှုရေးခွဲဝေမှုသည်အရေးကြီးပြီး၎င်းအတွက်ပြေပြစ်သောဖြေရှင်းချက်တစ်ခုဖန်တီးရန်မှာ Flare အားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဘလော့ဂ်များ၊ သတင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာများနှင့်မျှဝေသင့်သည့်အကြောင်းအရာရှိသူအားလုံးအတွက် Flare သည်၎င်းသည် လူမှုရေးဝေမျှခြင်းအက်ပ် ကျနော်တို့အမြဲတမ်းရှိခဲ့စေလိုကြောင်း။
မီးတောက်သည်အလွန်ကောင်းမွန်စွာရေးထားသည် WordPress ကို plugin လူမှုရေးဝေမျှခြင်းဘားကိုပြသထားတယ်။ Flare သည်ရှယ်ယာများနှင့်နောက်လိုက်များမောင်းနှင်ရာတွင်ထိရောက်မှုရှိနေစဉ်မျှဝေခြင်းအတွက်အနည်းငယ်မျှသာ၊ Flare သည်စာဖတ်သူကိုတုန့်ပြန်ပြီးအကြောင်းအရာကိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါအသုံးပြုသူနှင့်အတူရွေ့လျားသည်။ Flare ကိုသင်၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်ပရိသတ်၏ ဦး စားပေးမှုများနှင့်ကိုက်ညီရန်စီစဉ်နိုင်သည်။
Flare သည်ယခု beta တွင်ရှိနေပြီးသင်လုပ်နိုင်သည် WordPress တွင်ကူးယူပါ အခမဲ့ဖြစ်သည်။ Flare ကိုတီထွင်ခဲ့သောလူများသည်လူမှုရေးဘားကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ထိန်းထားရန်အထူးကြိုးပမ်းခဲ့သည် - ထို့နောက်သင်၏ WordPress ထည့်သွင်းအတွင်းသိမ်းဆည်းထားသည့်အချက်အလက်များကို post meta data အဖြစ်ပြန်တွန်းပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် variable များကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပြီးအမှန်တကယ်သူတို့ကိုသူတို့ကိုကျွန်ုပ်တို့၏ index နှင့် category စာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်ပေါင်းစည်းနိုင်ခဲ့သည် - ဆောင်းပါး၏လူကြိုက်များမှုကိုကောင်းမွန်သောညွှန်ပြချက်ဖြစ်သည်။
ဒီ post မှာ Flare ကိုဒေါ်လာ ၇၉ နဲ့ ၀ ယ်ဖို့ slot ၃၄ ခုပဲကျန်တော့တယ်။ Flare ကိုတစ်နှစ်ပေးသွင်းပြီးဒေါ်လာ ၁၀၀ ရတယ်။
Tags: အီးမေးလ်ကမီးတောက်ကဲ့သို့တွယ်အပ်Retweetမျှဝေဘားလူမှုရေးဝေစုထိမိ။ လဲ
သြဂုတ် 29, 2013 မှာ 6: 00 AM
Doug ဂရိတ် post! အလွန်အံ့သြဖွယ်အစွန်အဖျားမျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
သြဂုတ် 29, 2013 မှာ 9: 31 AM
သင်လောင်း! ထိုအခါငါပဲ agnostic ပလက်ဖောင်းဖြစ်သောသူတို့ရဲ့စနစ်သစ်၏ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်အထွတ်အထိပ်ကိုမြင်တော်မူ၏။ သိပ်ကောင်းတဲ့အရာပဲ!
စက်တင်ဘာ 14, 2013 မှာ 11: 27 AM
ဟုတ်တယ် ငါပလက်ဖောင်း agnostic အကြောင်းကိုဖတ်ပါနှင့်ပလက်ဖောင်းသူ့ဟာသူ transmedia ပုံပြင်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ပုံဖော်နိုင်သည်ကိုတကယ်အထင်ကြီးခဲ့သည်!